Alarobia 13 Septambra 2017, 00h07 (UTC+3)
lahatsoratra 84 634 amin’ny teny malagasy
Ny abidy koreanina izay azo antsoina ihany koa hoe hangul (hanja : 諺文 ; hangul : 한글 hangŭl, hangeul) na Chosŏn'gŭl (ao Korea Avaratra) dia abidy noforonina hanoratana ny fiteny koreanina. Ny tanjon'io fiforonana io dia hampihena ny tsifahaizana manoratra sy mamaky teny any Korea. Nivadika soratra ofisialy ny abidy hangul tamin'ny famoaha-dalàna tamin'ny taona 1894. Any korea avaratra, chosŏn'gŭl (조선글) no anaran'io abidy io.
Abidy tsy mampiasa sora-baventy ny soratra hangul. Ny hangul dia mampiasa litera 51, ary tononina hoe jamo (자모) izy ireo.
Arka ny lazain'i Louis-Jean Calvet, ny hangul, abidy iray mirindra tsara amin'ny rafi-peon'ny fiteny koreanina, ka anisan'ny abidy tsara indrindra eto an-tany.
Ankehitriny, ny endri-tsoratra hangul dia anisan'ny mampisongadina ny koreanina. Ny hanja (fomba fanoratana miendri-tsoratra sinoa) ankehitriny dia tsy ampiasaina intsony amin'ny fiainana mandavanandro ; ny asa soratra siantifika no tena mampiasa azy mba hampiavaka ny ireo teny mitovy tsipelina. Ny hanja no nanoratana ny teny koreanina hatramin'ny faramparan'ny taonjato faha-19. Efa nandramana nampiasain'ny fiteny hafa ny fiteny koreanina. Nanandrana nampiasa io abidy io ny fiteny cia-cia (ao Indonezia) nandritry ny taona vitsivitsy, fa niverina tamin'ny abidy latina indray noho ny tsifankasitrahan'ny manam-pahefana indonezianina. (tohiny...)
Dikany faharoa: entina hilazana vintana (chance) koa ny hoe "Alahamady" ka iray amin'ireo reni-vintana efatra amin'ny malagasy izy. Ny volana 12 mantsy dia samy manana ny vintany avy, izany hoe zanabitana ny volana 8 amin'izany.28 andro eo ho eo moa ny volana iray tamin'ny fanisan'andro malagasy ary ny andro iray dia mitondra anarambolana roa dia ny volana diavina ( io no reny vintana) sy anarambolana iray hafa(zanabitana).Ohatra volana diavina, Alahamady (renivintana), fa ilay zanabitana alohontsy: dia Alahamady alohontsy no vitan'ilay olona. Fa misy kosa olona sady teraka tamin'ny volana alahamady no mbola zanabitana (vava-)alahamady. Toa an-dRalambo, Andriamasinavalona ary Andrianampoinimerina izany.Ny volana alahamady hono no volana tsara indrindra satria ny olona teraka eo dia natao hitondra fanjakana. Ralambo zafikelin-dRabiby dia teraka ny vava alahamady koa lasany ny fanjakana. Tamin'i Rabiby dia voalohan'ny volana amin'ny volana 12 ny volana alahamady.
Alarobia, 13 Septambra 2017
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Alarobia 13 Septambra ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.
Folo lehibe indrindra : anglisy — alemana — frantsay — nerlandey — italiana — poloney — espaniola — rosy — japoney — portogey
Amin'ny fiteny afrikana : — Afar — Afrikaans — Akan — አማርኛ — Bamanankan — Chi-Chewa — chiTumbuka — Fulfude — Gĩkũyũ — Hausa / هَوُسَ — Igbo — isiXhosa — isiZulu — Kanuri — Kinyarwanda — Kirundi — Kiswahili — Kongo — Kuanyama — Lingala — Luganda — Malagasy — Malti — Oromoo — Oshiwambo — Otsiherero — Sängö — seSotho — Setswana — SiSwati — Soomaaliga — ትግርኛ — Tshivenda — Twi — Wolof — Xitsonga — Yorùbá
Hita tao amin'ny "http://mg.wiki.hancel.net/w/index.php?title=Wikipedia:Fandraisana&oldid=773136"
Voaova farany tamin'ny 24 Septambra 2015 amin'ny 23:32 ity pejy ity